‘इपिसेन्टर’ मधेस : तराई मधेसमा मुस्लिम समुदायको भोट कसलाई ? | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-05-27T17:25:56.995601+05:45
रौतहट । दुई नम्बर प्रदेशमा दोस्रो ठूलो समुदाय मुस्लिम हो । अहिले यहाँका मुस्लिम समुदायमाथि सबै राजनीतिक दलहरूको खास नजर छ । यस्तो नजर हुनुको पछाडि मुस्लिम समुदायको भोटबाट आफ्नो पार्टीलाई जिताउने दलहरूको दाउ छ ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार तराई मधेसका आठ जिल्लामा यादव १४ दशमलव १२ र मुसलमान ११ दशमलव ६ छन् । यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेको मुस्लिम समुदायको भोट हरेक निर्वाचनमा हार जितमा निर्णायक जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूलाई के थाहा छ भने असोज २ को स्थानीय तहमा मुस्लिम समुदायको सहयोग चाहिन्छ । यही कारण अहिले दुई नम्बर प्रदेशको चुनावमा मुस्लिमको मुद्दा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । हरेक राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मुस्लिम समुदायप्रति ‘नाटकीय’ माया बढेको छ ।
तर यहाँको मुस्लिम समुदाय पनि अन्य समुदायजस्तै राजनीतिक रूपमा विभाजित छ । धर्म र जातका आधारमा मुस्लिम समुदायले जति एकता देखाउँछन्, राजनीतिक रूपमा र चुनावको बेला भोटिङमा त्यो एकता देखिँदैन । मुस्लिमहरूबीचको विभाजनबाट राजनीतिक दल र नेताहरू भोट तान्ने कोशिस गर्छन् ।
तराई मधेसको चुनावमा निर्णायक मत मानिने मुस्लिम समुदाय यसपालिको स्थानीय तहका कस्ता एजेन्डा खोजिरेहका छन् ? यही जान्न हामी महोत्तरी र रौतहटका दुई मुस्लिम गाउँ पुगेका थियौँ । ती गाउँ पुग्दा पनि मुस्लिम समुदायबीच राजनीतिक रूपमा एकता देखिएन । मुस्लिम सुमदायबाट भिन्दा भिन्दै पार्टीका उम्मेदवार मैदानमा छन् । यसकारण भोट बैङ्कका रूपमा यो समुदायको भोट एउटै पार्टी वा व्यक्तिमा जाने सम्भावना निकै कम छ ।
जलेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ खैरामा मुस्लिम सुमदायको ठूलो बस्ती छ । यो नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्छ ।
खैरा पुग्दा त्यहाँ रहेको दारुल किराँत गरिब नवाज मदरसाका शिक्षक सकिवउल खान भेटिए । उनले भदौ २३ गतेसम्म आफ्नो ठाउँमा कोही पनि उम्मेदवार भोट माग्न नआएको बताए । उनले मुस्लिम समुदायमाथि नेताले धोका दिने गरेको सुनाए । ‘हामीले जिताएर पठाए पनि जितेपछि कोही पनि फर्केर आउँदैनन् ।’ उनले भने– ‘अहिले स्थानीय तहमा जिताएर पठाएका पनि जलेश्वरमै बस्छन् । फर्केर आउँछन् भन्ने विश्वास छैन ।’
उनले मुस्लिमको भोट खोजेपछि दलहरूले यो समुदायका व्यक्तिलाई ठूलो पदमा जानबाट रोक्ने गरेको सुनाए । उनका अनुसार गरिबीका कारण तराई मधेसका मुस्लिम समुदाय धेरै नै पछाडि छन् । उनल भने– ‘हामीलाई पद दिने त टाढाको कुरा हो, अगाडि बढ्न पनि दिँदैनन् ।’
उनले काठमाडौँमा बस्ने ठूला नेताहरूमाथि प्रश्न उठाए । ‘हामीलाई अन्य नेपाली नागरिक सरह बराबरीको दर्जा मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन । नेपाली नागरिक सम्झन्छन्, सम्झँदैनन् यो पनि थाहा छैन ।’ शिक्षक सकिवउल खानले गुनासो गरे ।
उनले स्थानीय तहको चुनावमा भोट माग्न आउने उम्मेदवारसँग आफ्नो समुदायले प्रतिबद्धता खोज्ने बताए । ‘मदरसा शिक्षालाई मान्यता दिने विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? मुस्लिमहरूको अधिकार, विकास र शिक्षाका लागि के गर्नुहुन्छ ? हामी यिनै प्रश्न गर्छौँ । नेताको प्रतिबद्धता सुनेर मात्र भोटमाथि निर्णय गर्छौँ ।’
यही ठाउँका अब्दुल सरवुक खान ७५ वर्षका भए । उनले २०१५ सालदेखि अहिलेसम्म सबै चुनावमा भोट हालेको तर केही नपाएको सुनाए । ‘भोटको बदलामा केही मिलेन ।’ उनले छोटो उत्तर दिए । उनको गुनासो पनि नेतालाई जिताएर काठमडौँ पठाएपछि नफर्कने गरेको भन्ने थियो । उनले मुस्लिम समुदायप्रति सकरात्मक नेतालाई भोट दिने र भोटको बदला विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिने बताए ।
जलेश्वरको ३ नम्बर वडामा मुस्लिम सुमदायको बाहुल्य रहेकाले तीन पार्टीले मुस्लिम समुदायबाट वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यहाँ एमालेबाट जमिन खान, माओवादीबाट इद्रिस अन्सारी र लोकतान्त्रिक फोरमबाट महोमहद मरतार अन्सारी वडा अध्यक्षको चुनावी मैदानमा छन् ।
यही गाउँका मोहमद नजाम मुदिन १९ वर्षका युवा हुन् । यिनलाई राजनीतिप्रति धेरै चासो छैन । भोटर लिस्टमा पनि उनको नाम छैन्, अर्थात लेखाएका छैनन् । भन्छन्– ‘मलाई राजनीतिमा त्यति चासो छैन । चासो राखेर केही पनि हुन्न । भोटिङका दिन म नेपालमा हुँदिनँ । पढ्नका लागि भारत जान्छु ।’
वीरगन्जमा लोकतान्त्रिक फोरमका मेयरका उम्मेदवार विमल श्रीवास्तव मुस्लिम सुमदायका सबै भोट मुस्लिम उम्मेदवारकहाँ नजाने बताउँछन् । जब कि यो महानगरपालिकामा एमाले र माओवादीले मुस्लिम उम्मेदवार अगाडि सारेका छन् । ‘मैले धर्म र जातको आधारमा राजनीति गरेको छैन । मलाई हिन्दूको पनि भोट आउँछ । मुस्लिमको पनि भोट आउँछ ।’ उनले भने– ‘मुस्लिम समुदायको धेरै भोट मलाई आउँछ भन्ने विश्वास छ ।’
वीरगन्ज महानगरपालिकाका काङ्ग्रेसका मेयरका उम्मेद्वार अजय द्विवेदी पहिलाजस्तै यसपालि पनि मुस्लिम समुदायबाट काङ्ग्रेसलाई भोट आउने दाबी गर्छन् । ‘काङ्ग्रेसको मुस्लिम समुदायमा पकड रहको छ । लोकप्रिय साथीहरू पनि छन् । उम्मेदवार पनि छन् । मुस्लिम समुदायमा काङ्ग्रेसको छवि राम्रो छ । पहिलाजस्तै भोट आउँछ ।’ उनले रातोपाटीसँग भने– ‘एमाले र माओवादीले उम्मेदवार बनाए पनि उहाँहरूलाई भोट जाँदैन ।’
वीरगन्ज महानगरपालिकामा माओवादीले ३१ वर्षका मुस्लिम युवा रहवर अन्सारीलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । उनी आफ्नो समुदायबाट धेरैभन्दा धेरै मत आउने बताउँछन् । त्यसबाहेक अन्य समुदायको भोट र सङ्गठनको भोटको बलमा चुनाव जित्ने दाबी गर्छन् । ‘मस्जिद, मदरसा, कविरस्तानका लागि मात्र मुस्लिम समुदाय अल्झिनु हुँदैन । यो समुदाय आफैँ नीति निर्माणको तहमा बसेर काम गर्नुपर्छ । कहिलेसम्म अरूसँग भीख माग्ने ?’ उनले आफ्नो कार्यालयमा रातोपाटीसँगको भेटमा भने ।
एमालेका वीरगन्जका मेयरका उम्मेदवार बसुरद्दिन अन्सारी पनि मुस्लिम समुदायबाट छन् । उनी मुस्लिम समुदायको भोट आफूलाई आउने दाबी गर्छन् । ‘म जातपातमा विश्वास गर्दिनँ । जनताको माग र सबै समुदायको मागअनुसार म उम्मेदवार भएको हुँ । मुस्लिम समुदायमाथि केही न केही विभेद छ । मलाई मुस्लिम सुमदायको विश्वास प्राप्त भएको छ ।’ आफ्नै निवासमा उनले रातोपाटीसँग भने ।
दुई नम्बर प्रदेशको चुनावी अभियानमा लागेकी माओवादी केन्द्रकी नेता उर्मिला अर्यालले तराई मधेसको मुस्लिम समुदायले माओवादीबाट धेरै अपेक्षा गरेको र त्यहीअनुसार भोट आउने बताइन् । ‘मुस्लिम समुदायले हामीसँग धेरै अपेक्षा गरेको छ । अहिले मुस्लिम समुदाय माओवादीसँग छ । अल्पसङ्ख्यक र उपेक्षित समुदायको मतको कदर गर्ने पार्टी पनि माओवादी हो ।’ उनले वीरगन्जमा आफ्नै निवासमा रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘मधेसमा माओवादीप्रतिका लहर छ । यो मुस्लिम समुदायमा पनि छ ।’
रौतहटमा चुनावी प्रचारमा लागेका काङ्ग्रेस नेता अफताव आलम मुस्लिम समुदायको भोट काङ्ग्रेसमै आउने बताउँछन् । ‘काँग्रेसबाहेक अरूले मुस्लिम समुदायको हित गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले काङ्ग्रेसले हाम्रो कल्याण गर्छ, सुरक्षा गर्छ भन्ने ठान्छन् । हामी उनीहरूको पहिचान र पीडा सम्बोधन गर्छौँ ।’ उनले भने– ‘लेखेर राख्नुस्, अधिकांश मुस्लिम मतदाता काङ्ग्रेसलाई भोट दिन्छन् ।’
वीरगन्जमा भेटिएका पत्रकार चन्द्र किशोर मुस्लिम समुदायलाई भोट बैङ्कका रूपमा विकपति गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । उनको भनाइमा एउटै समुदायको भोट एकै ठाउँ जाने अवस्था अझै बनेको छैन । ‘अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यक दुवैले जातीय नारा उचालेका छन् । प्रदेश नम्बर दुई मा सबै जातिलाई भोट बैङ्कका रूपमा विकसित गर्ने कोशिस भएको छ । तर, यो मनोविज्ञानको सामाजीकरण भएको छैन । दलहरू र उम्मेदवारहरू भोट बैङ्कका रूपमा विकसित गर्ने प्रयास गरेका छन् ।’ उनले आफ्नै निवासमा रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने ।
रौतहटको राजापुर नगरपालिकामा मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता छ । यहाँबाट काङ्ग्रेस, एमाले, राजपा, नयाँ शक्ति र फोरम लोकतान्त्रिकले मुस्मिल उम्मेदवार मेयरमा उठाएका छन । सबैले मुस्लिम मतदातामाथि नजर राखेका छन् । यो रौतहटको क्षेत्र नम्बर २ हो, जहाँबाट २०७० मा फोरम लोकतान्त्रिकका मुस्ताक आलमले जितेका थिए । उनका छोरा जयद आलम राजापुरमा मेयरका उम्मेदवार छन् ।
यहाँका मुस्लिम समुदायसँग हामीले कुराकानी गर्दा उनीहरूबीच एकरूपता देखिएन । राजनीतिक रूपमा उनीहरू विभाजित थिए । अर्थात् यहाँबाट एकै पार्टीमा सबैजसो भोट जाने अवस्था थिएन् । यो काङ्ग्रेस नेता अफताव आलमको गाउँ पनि हो । यो गाउँका मानिसहरूको भनाइ के छ भने नेतालाई जताएर पठाए पनि उनीहरूले जनताको चाहनाअनुसार विकास गर्दैनन् र गाउँ फर्केर आउँदैनन् ।
गाउँको एक मदरसाका मौलना दरख सिंहको भनाइ छ– ‘नेताहरूले जे मुद्दा लिएर जितेका थिए, त्यो काम गरेनन् । यसपालिको चुनावमा पनि जनतलाई झुक्याउने प्रयास भएको छ । नारा मात्र बाँडिएको छ ।’ उनले त यतिसम्म भने कि २०७० को चुनावमा बाहेक यहाँका अधिकांश मुस्लिम मतदाताले भोटसमेत हाल्न पाउँदैनथे । पार्टीका २०, ३० कार्यकर्ताले बुथमा सबै भोट खसाल्थे । उनको सङ्केत थियो– ‘यहाँ चुनावमा धाँधली हुने गरेको छ ।’
मधेसको राजनीतिमा मुस्लिम सुमदायले थोरै प्राप्त गरेको छ । तर, आन्दोलनमा चाहिँ सहभागिता जनाउने गरेको छ । सर्लाही र रौतहटमा हामीले भेटेका मधेस आन्दोलनका दुई सहिद परिवार मुस्लिम समुदायकै थिए ।
प्रदेश नम्बर दुईको हरेक ठाउँमा मुस्लिम समुदायको भोट निर्णायक जस्तो देखिन्छ । मुस्लिम समुदायबाट बहुमत भोट जता जान्छ, त्यही दल र उम्मदवारको जितको सम्भावना देखिन्छ । अचम्म के छ भने अन्यत्र मुस्लिम समुदायलाई टिकट नदिइए पनि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा हरेक दलले भोट तान्नकै लागि मुस्लिम समुदायबाट उम्मेदवार अगाडि सारेका छन् ।
पाँच वर्ष भित्रमा कांग्रेसलाई पूरानै अवस्थामा फर्काइनेछः देउवा
केपी ओलीले कांग्रेसलाई ‘सहयोगी’ भन्दा सिटौलाको आपत्ति, भेटेरै सोधे, ‘तपाईँले के भन्न खोज्नुभएको ?’
३३ किलो सुन प्रकरणमा नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ
कसरी कमाउनुभयो लालबाबुजी ५५ लाख : डा. केसी
संसदमा सुवासचन्द्र नेम्वाङको माग– राष्ट्रपतिलाई महारानी भनेको शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस्
सम्पत्ति विवरणमा प्रश्न उठेपछि बोले लालबाबु पण्डित